Monday June 10, 2019 - 11:24:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay hakad gelisay isku socodka gaadiidka dadweynaha ee isaga kala goosha magaalooyinka Mandheera iyo Nairobi.
Maamulka dowladda Kenya ugu magacaaban dhulka Soomaalida NFD ee gummeysiga ku jira ayaa amar kusiiyay gaadiidka Basaska ee dadka udaabula dhanka Nairobi in ay shaqada joojiyaan sababa ammaan darra aawgeed.
Jeremiah Ole Kasiom oo ah taliyaha booliska gobolka Mandheera ayaa sheegay in tallaabadan ay qaadeen kadib markii saraakiisha ammaanka ay soo gudbiyeen xog sheegaysa in dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ay dhaq dhaqaaqo wadaan gobolka.
Wuxuu sheegay in ay jirto baqdin ah in Al Shabaab weerarto gaadiidka basaska ee daabula dadka Nasaarada ah ee lagu deegaameeyay dhulka Soomaalida NFD.
Bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay ayay ciidamada Al Shabaab weeraro dhiigbadan ku daatay ka fuliyeen gobollada Wajeer iyo Mandheera waxaana weeraradaas ku dhintay ciidamo isugu jira Boolis iyo Melleteri.